Iinqwelo-moya zaseSaudi Arabia zibeka inqwelomoya yeenkwenkwezi ezintlanu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo-moya zaseSaudi Arabia zibeka inqwelomoya yeenkwenkwezi ezintlanu
Airlines • uhambo ngomoya • Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo-moya zaseSaudi Arabia (SAUDIA) Umphathi weflegi yelizwe laseSaudi Arabia ubekwe kwindawo eneenkwenkwezi ezintlanu kwiNqwelo moya yoMbutho woLuntu lwaBakhweli bamaNqwelo (APEX).
I-APEX Official Air Ratings ™ yinkqubo yokuqala yokulinganisa inqwelo-moya ngokusekelwe kuphela kwingxelo yabakhweli eqinisekisiweyo.
Elona shishini lilindelweyo lilindelwe ngokusekwe kwimpendulo yomntu okhweleyo kunye nokuqonda.
Ngexesha lamava okuHamba kweXesha elizayo kwi-APEX Virtual Expo, umsitho wamabhaso wabanjwa kwaye i-SAUDIA yayonwabile ngokunikwa iwonga leNkwenkwezi ezintlanu.
Usebenzisa isikali esineenkwenkwezi ezintlanu, ngaphezulu kwesigidi seenqwelomoya eziye zalinganiswa ngabakhweli phantse kuzo zonke iinqwelomoya ze-600 ezivela kwihlabathi liphela kwaye ngokuzimeleyo ziqinisekisiwe yinkampani yohlolo-zincwadi yangaphandle.
Ukunika ingxelo ngesihloko esidumileyo, uMlawuli-Jikelele wee-Airlines zaseSaudi Arabia, oHloniphekileyo u-Eng. U-Ibrahim Al-Omar uphawule wathi: “Iqela lonke e-SAUDIA liqhutywa ligunya lokubonelela ngomzekelo wenqanaba lenkonzo kwinyathelo ngalinye. Sichaza ngokutsha indlela iindwendwe zethu ezixabisekileyo ezikuva ngayo ukuhamba nathi, kwaye siyazingca ngokubona ukuba ukuza kuthi ga ngoku kolu hambo, utshintsho luye lwamkelwa kakuhle. ”
Uqhubeke noMnu. Al-Omar: “Sinqwenela ukubulela zonke iindwendwe zethu ngokubhabha ngeSAUDIA kwaye sijonge phambili ekwamkeleni bonke abo baphinde bangena.”
"Siyavuyisana neSaudia ngokunyuka ukuba ibe yi-APEX 2021 I-Star Star Global Airline esekwe kwiivoti zabakhweli ezizimeleyo ngeTripIt® kumawakawaka eenqwelomoya," utshilo u-CEO we-APEX uGqirha Joe Leader.
Uqhubeke wathi: “Kuphela yipesenti enye yeenqwelo moya kwi-APEX Five Star Airline kunye nomzamo omkhulu obekwe kwimveliso nakwinkonzo yabo. Ukulinganiswa kwe-SAUDIA ngabathengi kuye kwaphucuka ngokuthe rhoqo kunye nokuphuculwa kwemveliso yenqwelomoya kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ukuchukumisa endikuthandayo ngokobuqu ziitawuli ezishushu kudidi lwezoqoqosho, ibha yamanzi yamanye amazwe yaseSaudia / ibha yejusi ebhodini, iminikelo ebanzi yokubhabha kwinqwelomoya, ukuqiniswa konxibelelwano lweWi-Fi, ukuphuculwa kwemveliso yokubhabha, kunye nokuphuculwa kwenkonzo yabahambi. ”
I-SAUDIA ngaphambili yayifumene ireyithingi yeenkwenkwezi ezine kwi-APEX ngo-2017.
Lo nyaka uphawula i-75th isikhumbuzo sokuwongwa kweflegi yelizwe elaphumelela amabhaso eSaudi Arabia. I-SAUDIA yenye yeenqwelo-moya zokuqala ukusekwa kwingingqi ye-Mbindi Mpuma.
Kwiminyaka yakutshanje inqwelomoya yenze utyalo mali kakhulu kwizithuthi zayo eziyi-144 ezinqamlezileyo nezibanzi kwaye isebenza enye yezona zithuthi zincinci esibhakabhakeni, ngomyinge wenqwelomoya yobudala beminyaka emihlanu.
Inethiwekhi yendlela yenqwelomoya ibandakanya ngaphezulu kweendawo ezingama-95 zokuya kumazwekazi amane kuzo zonke izikhululo zeenqwelo moya ezingama-28 kubukumkani baseSaudi Arabia.
Iiprotokholi zokucoceka nzulu zicoca ngokupheleleyo emva kwendiza nganye.